Wɔdii Awurade Anwummeduane No Nisan 14 | Yesu Asetena
YESU KAA SƐ YUDA NA ƆBƐYI NO AMA
YESU HYƐƐ NKAE ADIDI FOFORO ASE
Anwummere a Yesu ne asomafo no dii Twam afahyɛ no, ɔhohoroo wɔn nan ho de yɛɛ ahobrɛase ho asuade maa wɔn. Adidi no akyi no, ɔfaa asɛm bi wɔ Dawid nkɔmhyɛ mu kaa sɛ: “Deɛ me ne no te asomdwoeɛ mu a mede me ho too ne soɔ mpo, deɛ na ɔdi m’aduane no, wama ne nantin so atia me.” Afei ɔkyerɛɛ mu sɛ: “Mo mu baako bɛyi me ama.”—Dwom 41:9; Yohane 13:18, 21.
Asomafo no tee saa no, wei hwɛ wei anim na wei ahwɛ wei anim. Afei obiara bisaa sɛ: “Awurade, ɛyɛ me anaa?” Yuda Iskariot mpo bisaa bi. Ná Yohane te Yesu nkyɛn pɛɛ, enti Petro ka kyerɛɛ no sɛ ɔmmisa Yesu onipa ko a ɔbɛyi no ama. Yohane twe bɛnee Yesu bisaa no sɛ: “Awurade, ɛyɛ hwan?”—Mateo 26:22; Yohane 13:25.
Yesu buaa sɛ: “Ɔno na mede paanoo sini bɛbɔ ayowa mu ama no.” Afei Yesu buu paanoo de bɔɔ ayowa mu maa Yuda kaa sɛ: “Ampa, onipa Ba no rekɔ sɛdeɛ wɔatwerɛ afa ne ho no, nanso onipa a wɔnam ne so bɛyi onipa Ba no ama no nnue! Sɛ wɔanwo saa nipa no mpo a, anka ɛyɛ.” (Yohane 13:26; Mateo 26:24) Yuda no ara mu, na n’adwene asɛe dada. Ɛnna Ɔbonsam nso bɛwuraa ne mu maa ɔkɔyɛɛ n’apɛde maa no. Enti ɔbɛdanee “ɔsɛeɛ ba.”—Yohane 6:64, 70; 12:4; 17:12.
Yesu ka kyerɛɛ Yuda sɛ: “Deɛ woreyɛ no, yɛ no ntɛmntɛm.” Ná Yuda na ɔhwɛ asomafo no sika so, enti ɛyɛɛ wɔn sɛ gyama Yesu reka akyerɛ no sɛ: “‘Kɔtotɔ nneɛma a yɛhia ma afahyɛ no,’ anaa ɔmfa biribi mma ahiafoɔ.” (Yohane 13:27-30) Yuda deɛ, na ɔrekɔyi Yesu ama, enti ɔsii kwan so kɔe.
Saa Twam afahyɛ no ara ase na Yesu de afahyɛ foforo sii hɔ. Ɔfaa paanoo, na ɔbɔɔ mpae bubuu mu de maa asomafo no sɛ wɔnni, na ɔkaa sɛ: “Yei gyina hɔ ma me nipadua a mo nti wɔde bɛma. Monkɔ so nyɛ yei mfa nkae me.” (Luka 22:19) Ɔmaa wɔde paanoo no faa asomafo no nyinaa anim maa wɔyii bi dii.
Afei ɔfaa kuruwa a nsa wom bɔɔ so mpae de maa asomafo no nyinaa nom bi, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Kuruwa yi gyina hɔ ma apam foforɔ a ɛnam me mogya so, deɛ wɔbɛhwie agu ama mo no.”—Luka 22:20.
Enti ansa na Yesu rebɛwu no, ɔyɛɛ nhyehyɛe a afe biara, ɛdu Nisan da a ɛtɔ so 14 a, n’akyidifo de bɛkae ne wuo. Afahyɛ no bɛma nnipa a wɔwɔ Yesu mu gyidi nyinaa akae nea Yesu ne n’Agya ayɛ ama wɔn no. Sɛ ɛnyɛ Yesu wuo no a, anka nnipa da so yɛ nkoa ma bɔne ne owuo. Saa afahyɛ no kyɛn Twam afahyɛ a na Yudafo no di no koraa, efisɛ wei deɛ, obiara a ɔwɔ Yesu mu gyidi bɛnya so mfaso.
Yesu kaa sɛ “wɔbɛhwie [ne mogya] agu ama nnipa bebree bɔne fafirie.” Ná asomafo anokwafo no ka nnipa a wɔbɛnya saa bɔne fafiri no ho. Wɔn na wɔbɛnya kwan ne Yesu akɔdi ade wɔ Ahenni a n’Agya de ama no no mu.—Mateo 26:28, 29.
Bible nkɔmhyɛ bɛn na ɛfa yɔnko ho a Yesu de kaa n’asɛm? Ɔkyerɛɛ mu sɛn?
Dɛn na Yesu ka kyerɛɛ Yuda sɛ ɔnyɛ? Asomafo a aka no tee ase sɛn?
Afahyɛ foforo bɛn na Yesu de sii hɔ? Adɛn nti na ɔhyɛɛ saa afahyɛ no ase?